Maro ny vehivavy nofy ny lehilahy manan-karena, na, fara fahakeliny, ny mpanankarena tia. Fa ny nofy dia tsy mampidi-doza ary mety tsy ho afaka mandrara ny sasany amin’ny nofinofy tsy tanteraka sy ny faniriana dia tanteraka, fa raha tsy izany nofy sy miezaka manao ny zavatra rehetra tsara. Mba mamaly ny fanontaniana Izay afaka mahita ny lehilahy manan-karena, dia mila mandinika ny toetra ireo ny olona, ary mba hahita, aiza no ahitana azy ireo. Ianao dia mitadiava lehilahy manan-karena, na dia ampy ny asa sarotra, fa io asa io dia mbola azo atao. Voalohany, tokony ho fantatrao ny fomba fijery ho an’ny manan-karena ny mety ho vadiny.
Amin’ny tranga voalohany, dia ny lehilahy izay tsy misy na inona na inona ezaka manan-karena nanana ny ampy, ny fitaka ary halatra nandray ny mpandresy ny loteria sns. Ity karazana izay miezaka ny mampiseho izay izy no manan-karena sy ny Manontolo ny mirehareha. Toy izany ny olona any, matetika ao amin’ny mamirapiratra fanatanjahan-tena fiara maodely (Ferrari, Porsche, Lamborghini na Jaguar), fitafiana afa-tsy ny malaza indrindra mpamorona lamaody azy, ary mazava ho azy izy, dia niezaka ny fiaraha-monina iray manontolo fantatro, iza no nividy akanjo sy ny kiraro. Endri-javatra iray hafa izany karazana dia mety fa tsy dia nanarona saika amin’ny vato sarobidy. Eo amin’ny tranga faharoa, ny olona no tena tsotra noho ny voalohany karazana sy ny toe-javatra, izy dia tsy miezaka ny dokam-barotra. Toy izany ny olona efa tratra ny harena matetika amin’ny alalan’ny asa ara-tsaina na ny matihanina toetra. Noho izany karazana olona ny fiara dia fomba fotsiny ny fitaterana, ka afaka mandeha ho azo antoka sy fanta-daza (toy ny Volvo, Mercedes, Audi, Ford, sy ny fiara Japoney). Fomba ny faharoa karazana tsy dia manintona, fa tokony ho vita ny Fitaovana avo lenta, ary ny Anarana ny marika ary seams, tsy mampaninona.
Avy firavaka ihany no lafo vidy watch, indrindra fa Soisa jereo Rolex
Ireo manan-karena foana ny olona be dia be ny zavatra, ary izy ireo dia foana any ho any maika, ary tsy maintsy mangina, tsy misy finday. Mba hahitana aiza no hahitana ny lehilahy manan-karena dia tsy maintsy ihany koa ny mahafantatra izay toerana izay no tena malaza. Ny ohatra voalohany amin’ireo lehilahy mpanankarena indrindra ao amin’ny faritra, indrindra fa eo amin’ny Casino, trano Fisakafoanana, ary swanky. Ianao koa dia afaka ho ao an-tampon-ny-ny fanatanjahan-tena sarotra hita. Fa mba hisambotra ny faharoa karazana mahita, ary tena mafy, satria ianao efa nandany ny fotoana rehetra ao amin’ny tsenan’ny asa. Raha tsorina dia, ianao mba hiala sasatra amin’ny tsy miankina ny Fikambanana. Ny Resorts afaka hitsena azy, fa dia tsy mitovy amin’ny olon-tsotra mpizaha tany mba ho tena mahomby. Ao amin’ny trano Fisakafoanana, dia azo atao ihany koa ny mahita azy, saingy amin’ny Ankapobeny dia hisy fivoriana miaraka amin’ny mpiara-miasa, ary fomba, dia tsy hiverina avy. Ny zava-Dehibe indrindra dia ny hoe samy karazana manan-karena ny olona dia mety ho hita ao amin’ny fivarotana lehibe, na ao amin’ny Showroom. Mahita ny fomba mety indrindra, ny olona ao amin’ny orinasa Fiara vokatra (Mercedes, Audi, Volkswagen, Ferrari, Jaguar, sns.). Eto ireo vehivavy dia tena mora ny manao olom-pantatra amin’ny lehilahy manan-karena, ho anao fotsiny dia afaka mangataka torohevitra na manontany ianao hoe inona ny Anarany izany na fa ny an-Tsipiriany ny fiara, ary nahoana izany no ilaina, ary ny olona dia mirehareha ny natiora, ny fitiavana, sy ny fampisehoana ny Fahalalana ny fiara orinasa. You can also, mazava ho azy, ny fikarohana ho an’ny mpanan-karena ny vadiny sy ny ho avy, ao amin’ny toerana hafa, fa ny vokany dia be ny kely, ka ny Safidy ny tsara indrindra Auto Shop Izany no ilaina mba tsara ho an’ny ny hividy miomana. Mba hanaovana izany, dia mila mitsidika ny lafo Salon, ary mandany tena mendrika vola, fa tsy mendrika izany noho ny tranga ny marina mampiasa ny soso-kevitra, izay afaka mahita ny manan-karena sy ny vadiny
← No mamaly ny olona raha tsy misy ny sary ao amin'ny fiarahana
Mampiaraka ny pejy →